Firy ny zaza ananan'i Rosie O'Donnell? Ny momba ny fianakaviany rehetra rehefa mizara sary tsy fahita amin'ny zanany lahy, Blake - Pop-Kolontsaina
Vao tsy ela akory izay i Rosie O'Donnell dia nizara sary mampihetsi-po tamin'ny fianakaviany. Mitondra azy Instagram , nizara sary maromaro izy tamin'ny 11 Aogositra izay nahitana an'i Dakota zanany vavy 8 taona, Blake zanany 21 taona, sy Teresa sakaizany.
Ao amin'ny sary voalohany, Blake nametraka ny tanany manodidina an'i Dakota ho an'ny sary iray tampo amin'ny mpiray tam-po aminy. Ilay mpanao hatsikana fanta-daza dia naka ny sarin'i Blake sy Teresa manao sarontava mba hiarovana azy ireo amin'ny areti-mandringana Covid-19 mitohy.
Rosie O'Donnell dia hita amin'ny sary farany izay nametrahany ny tanany manodidina an'i Dakota zanany vavy ary nijoro teo anilan'i Blake sy i Teresa.
Lahatsoratra zarain'i Rosie O'Donnell (@rosie)
Ireo mpanaraka ny 59 taona dia namaly ny sary tamin'ny filazany fa haingana ny fitomboan'ny zanany. Vivienne, zanakavavin'i Rosie, dia nahazo diplaoma tamin'ny sekoly ambaratonga voalohany tamin'ny fiandohan'ity fahavaratra ity ary nizara fanomezana mahafinaritra tao amin'ny Instagram. Ireo mpanaraka ny mpilalao sarimihetsika 'Star Search' dia naneho ny tsy finoany ireo fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny taonan'ny Vivienne tamin'ny fanehoan-kevitra tamin'ilay sary.
Tamin'ny volana aprily 2020, Rosie O'Donnell dia niresaka tamin'i Seth Meyers tamin'ny fizarana iray amin'ny alina alina ary nizara ny zavatra niainany tamin'ny fandaniana fotoana tany an-trano tamin'ireo zanany nandritra ny areti-mandringana.
dia tsy nanana namana toy ny olon-dehibe
Zanak'i Rosie O'Donnell
Ilay mpilalao sarimihetsika, mpanoratra ary mpanao hatsikana, Rosie O'Donnell dia nahavita izany rehetra izany (Sary avy amin'i rosie / Instagram)
Fantatra koa amin'ny anarana hoe Roseann O'Donnell, malaza izy mpanao hatsikana , mpamokatra, mpilalao sarimihetsika, mpanoratra ary toetran'ny fahitalavitra. Teraka tamin'ny 21 martsa 1962, Rosie dia nanomboka ny asany hatsikana tamin'ny fahazazany.
Reny manan-janaka dimy izy. Ny zanaky ny Commack, New York, dia naka ny zanany voalohany, Parker Jaren O'Donnell, ho zazakely tamin'ny 1995.
Rosie O'Donnell dia namatotra ny knot niaraka tamin'ny mpanantanteraka Nickelodeon teo aloha Kelli Carpenter tamin'ny 2004. Izy ireo dia nanjary ray aman-dreny manan-janaka telo hafa - Chelsea Belle O'Donnell, teraka tamin'ny 1997; Blake Christopher O'Donnell, teraka tamin'ny taona 1999; ary Vivienne Rose O'Donnell, naterak'i Kelli tamin'ny alàlan'ny insemination artifisialy tamin'ny 2002.
Ny fianakavian'ilay olona fahita amin'ny fahitalavitra dia naka zaza nitaiza an'i Mia (teraka 1997) ary nikasa ny handray azy. Na izany aza, nesorin'ny fanjakan'i Florida tao an-tranony i Mia tamin'ny taona 2001, ary nanomboka niasa be i Rosie mba hamaranana ny lalàna Florida izay mandrara ny fananganana fianakaviana mitovy taovam-pananahana.
Nanambara i Rosie O'Donnell tamin'ny 2009 fa nifindra tao an-tranony i Kelli Carpenter tamin'ny 2007. Nanomboka niaraka tamin'i Michelle Rounds tamin'ny taona 2011 ny mpilalao sarimihetsika 'Fosters', ary nivady izy ireo tamin'ny 2012.
Nanangana zazavavy kely iray ry Dakota, tamin'ny 2013, saingy nisaraka tamin'ny 2014, ary vita tamin'ny 2015 ny fisaraham-panambadiana.
Vakio ihany koa: 'Olona marina, fotoana tsy mahamety': Charli D'Amelio niresaka momba ny fisaraham-bahoaka 'mahatsiravina' niaraka tamin'i Lil Huddy tamin'ny 'The D'Amelio Show' ho avy
Ahoana no tsy dia mila sahirana ara-pientanam-po?
tsy maninona aho izao
Nahoana no ny lehilahy mandao ny vady vehivavy hafa
fomba hanehoana fanajana ny hafa
dragon ball z fizarana vaovao vaovao
torohevitra momba ny fifandraisana amin'ny lehilahy tanora kokoa